Ity no interface vaovao an'ny Google Play Store | Vaovao momba ny gadget
Ity no interface vaovao an'ny Google Play Store
Google Play no fampiharana ampiasainay isan'andro indrindra amin'ny fitaovana Android, toy ny App Store ho an'ny fitaovana iOS. Ireo rindranasa ireo dia manampy anay hahita ny rindranasa rehetra ilainay ary amin'ny tranga Google Play dia tsara vintana izahay satria nisy sary navoakan'ny sary sasany izay mampiseho amintsika fa dia hahazo fanovana interface tsara atsy ho atsy.
Ilay famoahana dia mampiseho sary maromaro izay ahitantsika ny maha-zava-baovao izany ny bara fikarohana dia tsy ho hita ao amin'ity interface vaovao ity intsony. Izao dia hiseho ny vera manelaka izay hahafahantsika mikaroka ireo rindranasa tadiavintsika. Fa nandeha lavitra kokoa ireo fiovana ary hitantsika ny fomba hanovana ny fizarana "Fialamboly" izay hitantsika eo akaikin'ny "Fampiharana sy lalao" ho "Sarimihetsika, mozika ary boky", amin'io fomba io dia voalamina kely kokoa ny zava-drehetra. Fa mbola misy ...
Ary izao miaraka amin'ity interface vaovao ity dia ho hitantsika ireo sary amin'ny endrika App Store madio indrindra, eny, ny endrika dia mampahatsiahy antsika ny fivarotana Apple manasokajy ireo lalao, fitaovana ary rindranasa tahaka azy ireo bebe kokoa na latsaka malaza. Hitanay fa tsy misy fiovana mahery vaika eo amin'ny tsipika ankapobeny amin'ny fampiharana, saingy misy vaovao amin'ny ankapobeny.
Iray amin'ireo zava-baovao ireo koa ny sain'ilay rindranasa na fampiharana apetraka izay efa hapetraka ao amin'ny magazay, izay tsy isalasalana fa mandray ampahany tsara amin'ny fijerin'ny mpampiasa azy satria misongadina be io. Ity kinova vaovao ity dia afaka manatsara ny antsipiriany bebe kokoa alohan'ny hamoahana ny besinimaro, saingy mandritra ny fotoana fohy ary tsy misy daty famotsorana mazava mety hijanona izany araka ny fahitantsika azy amin'ity famoahana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ity no interface vaovao an'ny Google Play Store
Tiako ity tranonkala ity
Inona avy ireo fotoana Twitter ary ahoana ny famoronana ny anao
Najanona i Amazon amin'ny fandefasana ny vidin'ny fandefasana amin'ny vidiny mihoatra ny 29 euro